ရှာဖွေမယ်၊ ကုသမယ် အသည်းရောင်ရောဂါ အန္တရာယ် - Samitivej Hospital Bangkok Thailand - JCI Accredited World Class Hospital
ရှာဖွေမယ်၊ ကုသမယ် အသည်းရောင်ရောဂါ အန္တရာယ်
မတ် 8, 2018 Nathavut Sirimontaporn, M.D.
အသည်းရောင်ရောဂါဆိုတာ အသည်းကို ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးအမျိုးမျိုးရဲ့ ပြင်းပြင်းထန်ထန် တိုက်ခိုက်မှုကြောင့် ဖြစ်ရပါတယ်။ ဖြစ်ပွားတဲ့ပုံစံတွေကလည်း တစ်ခုနဲ့တစ်ခု မတူခြားနားကြပြီး ဗိုင်းရပ်စ်အမျိုးအစားမျိုးစုံက အသည်းကို ရောင်ရမ်း စေခြင်းနဲ့ ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ ဆောင်ရွက်မှုတွေကို ဖြစ်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။
အဓိကခွဲခြားရမယ်ဆိုရင်တော့ ရုတ်တရက်အသည်းရောင်ရမ်းခြင်း နဲ့ နာတာရှည်အသည်းရောင်ရောဂါ ဆိုပြီး ၂ မျိုး ခွဲနိုင်ပါတယ်။ အသည်းရောင်ရောဂါတွေအားလုံးဟာ ဖြစ်ပွားတဲ့လက္ခဏာချင်းတူညီတယ်ဆိုပေမယ့် အဓိကျတဲ့ ကွဲပြားမှုတွေကတော့ အများအပြားရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်။ အသည်းရောင်ရောဂါ A ကို ခံစားနေရတဲ့လူနာတွေဟာ ပုံမှန်အားဖြင့် ဆေးကုသမှုမပြုလုပ်ဘဲနဲ့တောင် သက်သာလာနိုင်ပြီးတော့ ရေရှည်ဖြစ်ပွားတတ်တာမျိုးလည်း မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် အသည်းရောင်ရောဂါ B နဲ့ C ကို ခံစားနေရရင်တော့ နာတာရှည်ဖြစ်ပွားနိုင်ပြီးတော့ ရေရှည်မှာ အသည်းကို ထိခိုက်မှုတွေကိုဖြစ်ပွားနိုင်ပါတယ်။ အဆိုးဆုံးကတော့ C ပိုးဟာ အသည်းရောင်ရောဂါ A နဲ့ B လို ကာကွယ်ဆေးမရှိသေးတာပါပဲ။
အသည်းရောင်ရောဂါ A ကိုဖြစ်စေတဲ့အရာတွေကတော့ မသန့်ရှင်းတဲ့ ရေ၊ သေချာစွာသန့်စင်မထားတဲ့ သားငါးအစိမ်းတွေ၊ အိမ်သာတက်ပြီး လက်ကိုစင်ကြယ်စွာမဆေးကြောပဲ ကိုင်တွယ်တဲ့သူတွေ၊ ရောဂါပိုးရှိသူနဲ့ အထိအတွေ့ရှိသူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ အသည်းရောင်ရောဂါ B ကတော့ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆက်ဆံမှုတွေ၊ ဆေးထိုးအပ်ကို မျှဝေအသုံးပြုတာ၊ ဒါမှမဟုတ် မိခင်ကနေ ကလေးကိုကူးစက်တာ စတာတွေကနေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ နောက်ဆုံးဖြစ်တဲ့ အသည်းရောင်ရောဂါပိုး C ကတော့ အခုရောဂါပိုး ၃ မျိုးထဲမှာ အန္တရာယ် အများဆုံးဖြစ်ပြီးတော့ ရောဂါပိုးရှိတဲ့ သွေးကနေ တစ်ဆင့် ဒါမှမဟုတ် လိင်ဆက်ဆံမှုကနေတစ်ဆင့် ကူးစက်နိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။
အသည်းရောင်ရောဂါကြိုတင်ကာကွယ်ဆေးတွေဟာ A နဲ့ B အတွက်ရရှိနိုင်ပါတယ်။ B အတွက် ကြိုတင်ဆေးတွေက မဖြစ်မနေသောက်သုံးဖို့ လိုအပ်တတ်ပြီးတော့ A အတွက် ကြိုတင်ကာကွယ်ဆေးကိုတော့ မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲတဲ့သူတွေမှာ ဆေးထိုးအပ်ကို မျှဝေအသုံးပြုမှု၊ ကူးစက်ဖို့အခွင့်အလမ်းများတဲ့နေရာတွေကို ခရီးသွားခြင်း၊ နာတာရှည်အသည်းရောဂါရှိသူတွေ၊ ယောင်္ကျားချင်း လိင်ဆက်ဆံတဲ့သူတွေကို အဓိကသောက်သုံးဖို့ တိုက်တွန်းတတ်တာဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်လို့ လိုအပ်တယ်လို့ထင်ရင်လည်း ကြိုတင်ကာကွယ်ဆေးကို တောင်းခံနိုင်ပါတယ်။ စိတ်ချရတဲ့လိင်ဆက်ဆံမှုနဲ့ အခြားကျန်းမာရေးနဲ့ ကိုက်ညီတဲ့ အစားအသောက်၊ နေထိုင်မှုပုံစံတွေကို ပြုမူဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့်လည်း ရောဂါပိုး မကူးစက်အောင် ကာကွယ်နိုင်ပါတယ်။
ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ခြင်း၊ အဖျားအနည်းငယ်ရှိခြင်း၊ အရောင်ရင့်သောဆီးသွားခြင်း၊ အရိုးအဆစ်နာကျင်ခြင်း၊ ဝမ်းဗိုက် မအီမသာဖြစ်ခြင်း၊ အန်ခြင်းစတဲ့ ရောဂါလက္ခဏာတွေဟာ အသည်းရောင်ရောဂါဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်တွေကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ကံမကောင်းစွာနဲ့ အသည်းရောင်ရောဂါပိုး C လိုမျိုး ဗိုင်းရပ်စ်တွေဟာ သိသာတဲ့လက္ခဏာတွေကို နာတာရှည်အသည်းရောင်ရောဂါအဖြစ်မကူးပြောင်းခင် ပြသခြင်းမရှိပါဘူး။ နာတာရှည်အသည်းရောင်ရောဂါ ကိုတော့ ဝမ်းဗိုက်နဲ့ အသည်းကို စစ်ဆေးမှသိရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
တကယ်လို့ ကိုယ့်မှာ အသည်းရောင်ရောဂါလက္ခဏာတွေဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ သံသယရှိနေတယ်၊ ဒါမှမဟုတ် ကူးစက်နိုင်စွမ်းမြင့်မားတဲ့နေရာတွေကို သွားခဲ့တယ်ဆိုရင် ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှုကို ခံယူသင့်ပါတယ်။ ဘဝနေထိုင်မှုပုံစံကို ပြောင်းလဲပစ်ခြင်းနဲ့ ထိရောက်တဲ့ ကုသမှုတွေဟာလည်း အသည်းထိခိုက်မှုကို လျော့ကျ စေမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်ကိုယ်ကို ဂရုစိုက်ပြီး မကူးစက်အောင် သတိထားနေထိုင်ခြင်းဖြင့် ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်ကသူတွေဆီ ကူးစက်ဖြစ်ပွားမှုကိုပါ လျှော့ချနိုင်မှာဖြစ်ပါကြောင်း တင်ပြလိုက်ရပါတယ်။
ရှာဖွေမယ်၊ ကုသမယ် အသည်းရောင်ရောဂါ အန္တရာယ် အသည်းရောင်ရောဂါဆိုတာ အသည်းကို ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးအမျိုးမျိုးရဲ့ ပြင်းပြင်းထန်ထန် တိုက်ခိုက်မှုကြောင့် ဖြစ်ရပါတယ်။ ဖြစ်ပွားတဲ့ပုံစံတွေကလည်း တစ်ခုနဲ့တစ်ခု မတူခြားနားကြပြီး ဗိုင်းရပ်စ်အမျိုးအစားမျိုးစုံက အသည်းကို ရောင်ရမ်း စေခြင်းနဲ့ ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ ဆောင်ရွက်မှုတွေကို ဖြစ်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။
User rating: 3.27 out of5with 33 ratings
M.D., Faculty of Medicine, Chulalongkorn University. Faculty of Medicine Chulalongkorn University , 2009